Home News Saameynta Fatahaada Webiga Shabeelle oo korortay&Gudiyo lamagacaabay
Saameynta Fatahaada Webiga Shabeelle oo korortay&Gudiyo lamagacaabay
Fatahaadaha Webiga Shabelle ayaa si weyn u saameeyay Magaalada Baledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan, iyadoo boqolaal qoys ay ku khasbeen in ay guryahooda isaga barakacaan.
Wariye-yaasha Magaalada Baledweyne ayaa soo sheegaya fatahaadaha Webiga Shabelle in ay ku sii kordhayan xaafadaha magaalada, maalinba maalinta ka dambeysana ay ku sii fidayan xaafado hor leh.
Wariye-yaasha ayaa ku waramaya in xilligan laga baqdin qabo in fatahaaduhu ay xiraan wadada laamiga ah ee dhexmarta Magaalada Baledweyne, maadaama qulqulka fatahaaduhu yihiin kuwo xoogan.
Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa Khamiistii sheegay in shan iyo konton oo qof ay ku barakaceen fatahaadaha Webiga Shabelle ee Magaalada Baledweyne.
Qoysaska ka barakacay Magaalada Baledweyne ayaa maciin-biday deegaanada hoos-tagga magaaladaasi, halkaasoo ay nolol adag ku wajahayan.
Madaxweynaha Hirshabelle, Maxamed Cabdi Waare ayaa waxaa uu xalay magacaabay guddi gurmad, oo ka shaqeeya fatahaadaha ka jira Deegaanada Hirshabelle. Madaxweynaha ayaa digreeto ku magacaabay guddigan oo ka kooban afar iyo toban xubnood, waxaana uu u wakiishay in ay gurmad u fidiyaan shacabka ay fatahaaduhu saameeyeen. Guddigan ayaa waxaa guddoomiye looga dhigay Cabd-mahad Cabdullaahi Qoorgaab, Wasiirka Gargaarka Hirshabelle.
Guddigan ayaa waxaa lagu wadaa in ay wada shaqayn la yeeshaan Guddiga Gurmad Qaran, oo Sabtidii uu magacaabay Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Xasan Cali Khayre.